KALA DUWANAANTA CANABKA "CARDINAL" - VITICULTURE
In dalalka koonfurta ee Ukraine casri ah iyo Ruushka, viticulture waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan beeraha.
Laga yaabe this thanks to this, maanta oo ah warshad of Gods ayaa noqday mid aad u awoodi karo in koraya qof kasta.
Dhab ahaantii, way adagtahay in la helo goobo gaar ah, oo aan lagu qurxin laamaha daaqa.
Mid ka mid ah noocyo canab, kuwaas oo inta badan laga heli karaa dachas iyo rabitaanka guryaha hiwaayadda, waa "Canqada" canab.
Kala duwanaantani waxay ku jirtay sarreenka ugu caansan sannado badan intii uu ku lahaa deynta sare iyo tan aan caadi ahayn.
Waxay ku saabsan tahay sifooyinka, qaababka beeritaanka iyo beerashada ee lagu falanqeyn doono hoos.
Sida loo kala saaro canabka "Cardinal" noocyo kale? Astaamaha sharaxaadda ee kala duwanaanta
Kala duwanaan canab ah oo aad u baahsan, oo loo yaqaano dalalka koonfurta ee Yurub, Ukraine, Ruushka iyo wadamada Aasiya Aasiya. Asalka noocyada kala duwan ee "Cardinal" waa Ameerika, halkaasoo aqoonyahanadu ay ahaayeen noocyo "Queen of Vineyards" oo leh canab "Alfons Lavalle". Natiijada waayo-aragnimadan, canab miiska qurxan ayaa laga helay miro ballaaran oo muuqaal muuqaal leh.
Qaababka farabadan ee canab "Cardinal"
Xajmiga farabadan ee canab "Cardinal" waa mid aad u ballaaran. Celcelis ahaan dhererka farqiga u dhexeeya 19 ilaa 28 sentimitir, dhererkuna wuxuu ka bilaabmaa 13 ilaa 19 sentimitir. Inkastoo, isla mar ahaantaana, celceliska qiyaasta tirada kooxdu waa mid yar - kaliya 342-510 grams. Mararka qaarkood waxaa jira kooxo isku dhejiya 900 garaam.
Sidoo kale, kooxo kala duwan oo kala duwan ayaa ku kala duwan qaabka qallalka ah ee cylindric, si aad ah uga soo hooseeyaa dhinaca hoose. Dhismaha xerada waa mid aad u dabacsan. Lugta noocan oo kale ah sida caadiga ah waa mid dheer, oo leh shanlo cagaaran, oo awood u leh inuu si fudud u jajabiyo.
Sida horey loogu soo sheegey, berry ee noocyo kala duwan yihiin kuwo aad u weyn. Dhererka hal berri ayaa ku kala duwanaan kara 2.1 ilaa 2.9 sentimitir, halka dhererkeedu ka yar yahay 1.8 ilaa 2.3 sentimitir. Isla mar ahaantaana, tiro ka mid ah canab "Cardinal" waa qiyaastii 7-9 garaam. In muuqaalka, waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin qaabka oval ama oval-qaabka.
Mararka qaarkood waxaa jira miro yar oo leh caarad yaryar, taas oo lagu gartaa qanjir yar yar. Canab waxaa lagu rinjiyeeyaa midab casaan ah. Diirka ayaa daboolaya lakabka khafiifka ah ee wax dhadhanka ah. Inkasta oo cufnaanta qoyaanka ee maqaarka ee "Cardinal", waa mid aad u awood u leh inuu jebiyo.
Qeybta "Cardinal" waxay ku leedahay qaab aad u fiican, casiir leh oo casri ah. Midabka saxarka ee nooca berry ee noocyada this waa cagaaran-cad, waxoogaa jelly ah. Bartamaha sidoo kale waa abuur. Lambarkoodu waa qiyaastii 2-4, laakiin way weyn yihiin. Berry waxay leeyihiin dhadhan aan caadi ahayn, taas oo lagu daro quruxsan, laakiin aan caddayn, dhadhanka dhirta.
Berry waxaa ku jira xaddi badan oo sonkor ah, oo u dhigma 15-18 garaam halkii 100 millilitir oo casiir ah. Sidaa darteed, acidity ee kala duwan inta badan ma ka badan 7-9 garaam hal litir oo casiir ah.
Ujeedada ugu weyn ee canabka "Cardinal" waa inta badan miis. Isbarbardhiga iyo jajabyada laga sameeyey, kuwaas oo si fiican u muuqda iyo dhadhanka, ayaa si gaar ah loo qiimeeyaa. Dhammaan alaabooyinka la soo saaray ayaa si wanaagsan loo kaydiyaa marka la diyaariyo heerarka lagama maarmaanka u ah diyaarintooda Qaar badan oo beeraley ah, noocyo kala duwan ayaa la kobciyaa ama la cuno cunto cusub, ama iib ah.
Noocyada xilliga Bisaylkiisa ee canab iyo tilmaamayaasha dhalidooda
Xilligii la qaboobo ee "Cardinal", kala duwanaanta waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya. Bisaylka ee berry ah ee canabkani wuxuu mar hore ku yimid 121 ka dib markii aragga indhaha, sidaas, dhab ahaantii, dhameystiraya muddada daaqsinka ee baadiyaha. Miraha canab waxay helayaan midabkooda dabiiciga ah, taas oo muujinaysa qaangaadhnimo, dhexe ama bilawga nuska labaad ee bisha Agoosto. Waxaa muhiim ah in la ogaado in noocyada kala duwan ay calaamad u tahay ubax bisexual ah, sababtoo ah wax soo saarku waxay dhacaan sanad walba iyo heer sare.
Waxsoosaarka caleemaha noocaan ah waxaa loo arkaa mid aad u sareeya, inkastoo mar walba suurtagal ah in la helo natiijooyin heer sare ah. Sababta tani waa joogitaanka tiro ka mid ah cilladaha "Canadian" canab, oo inta badan keena wax-soo-saarka aan deganayn, iyaga oo daciifiya, ama gabi ahaanba xayiraya qoryaha geedaha. Laakiin wax badan oo ka hooseeya.
Iyo faa'iidooyinka leh ee dhalidda kala duwan ee lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah xaqiiqda ah, celcelis ahaan, ku saabsan 67 caleemaha waxaa la aasaasay hal baadiyaha ah, taas oo suuragal ah in ay siin karaan dhalid aad u sarreeya. Marka dhan, kaliya hal sida Ka baxsiga baqdinta badanaa waxay udub dhexaad u tahay 0.9 xujo, halka miro-xambaarsigan uu yahay 1.3.
Awoodda kobaca ee baadiyaha Canaanku waxay u dhigantaa celcelis ahaan, inkasta oo la ogaaday in tiknoolajiyada beeraha wanaagsan, labada baadiyaha iyo dalagga ay si weyn u hagaajin karaan waxqabadkooda. Tan iyo halkan waxaan ku talinaynaa qiimaha celceliska dhammaan tilmaamayaasha kala duwan ee canabka, iyadoo la isku darayo natiijooyinka beeraha iyo warshadaha beeraha labadaba.
Faa'iidada canab "Cardinal" - sirta ugu weyn ee kala duwanaanta
Markaad dooranaysid noocyada kala duwan ee canabka this ee beeritaanka on their gaar ah, kuwa winegrowers ugu horeyn ee dhan fiiro gaar ah u size size weyn ee berry, iyo sidoo kale muuqaal fiican oo dhadhan. Waxaa sidoo kale mudan in la ogaado:
Grape "Cardinal" waxay leedahay mid si xad dhaaf ah muddo dheer ee kaydinta ee goosashada, taas oo ku saabsan 3 bilood.
Tilmaamaha dhadhanka ah ee berry canab ah "Cardinal" ayaa lagu qiimeeyaa taatikada xirfadeed ee 8-9 dhibcood.
Rucubyada canabka ah ee noocyada kala duwan waxay u dulqaadanayaan waqti dheer gaadiidka, isla waqtigaas, iyada oo aan waxyeello haysan iyo iyada oo aan lumin wax soo jiidasho.
Tayada sare ee laga sameeyey canugga ilaalinta.
"Cardinal" oo kala duwan ayaa awood u leh inay ka farxaan waxsoosaar sarreysa iyadoo la hubinayo shuruudaha ugu habboon beeraha
Faa'iido la'aanta "Cardinal" canab - waxaan isku hubinnaa aqoonta si looga fogaado dhibaatooyinka xun
Si loo gaaro runtii sare oo macaan leh oo canab ah "Cardinal" dhab ahaantii maaha mid aad u fudud, maxaa yeelay waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan oo aan gaar ahaan la sii wadi karin. Hase yeeshee, haddii ay tahay in la ogaado dhammaan dhibaatooyinka laga yaabo inay la kulmaan, waxaa suurtagal ah in la siiyo bushar sabiib ah oo leh dhammaan daryeelka lagama maarmaanka ah iyo in laga ilaaliyo dhaawac iyo khasaaro beereed.
Kala duwanaanshuhu wuxuu celcelis ahaan iska caabin u yahay cudurada beeraleyda ah ee caadiga ah sida dhoobo caarada, caarada iyo kansarka bakteeriyada.
Waxaa jira xaalado badan oo soo noqnoqonaya guuldarada canab ah ee "Grace" oo leh kareemka cawl. Duufaan canabkeed ayaa calaamad u ah khatarta weyn ee baadiyaha sabiibta ee kala duwan.
Marka la eego xaaladaha cimilada xun, goosgooska mustaqbalka waa uu aad u kulul yahay: ubaxyada iyo ugxan-yare canabku waa la qubey, miraha canabka ayaa laga yaabaa in la diiriyo. Sidaa awgeed, dharka ganacsiga ee canabku wuu dhacaa, xayawaanku way yar yahiin.
Cadaadiska heerkulka hooseeya ee xilliga qaboobaha ee noocyada la tilmaamay ayaa sidoo kale hooseysa. Sidoo kale, marar badan ayaa laga yaabaa in ay saameeyaan dhaxan guga, sida canab ah bilaabaan inay hore u bloom.
Miraha ka mid ah noocyada canabka this canuga badanaa ma u bislaadaan si siman.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo ku saabsan beerista dayrta dayrta
Dhammaan tilmaamaha lagama maarmaanka u ah beeritaanka saxda ah ee canab "Cardinal" ee goobta
Su'aasha ugu weyn ee soo baxda ka hor inta aan la beeriin canab: sida iyo waxa la abuurayo. Marka la eego kala duwanaanshaha Cardinal, doorasho dheeraad ah oo ku haboon waxay noqon doontaa in la doorto qaab beerto for jarista jaridda. Faa'iidada fursaddan ayaa ah in ay aad u badan tahay in ay soo saarto geed canab ah oo sareysa marka la goosto. miirashada qoryaha dilka ah. Dabcan, waxaa suurtogal ah in ay kortaan noocyada kala duwan ee sapling, laakiin geedi socodka ayaa noqon doona mid aad u dheer iyo baadiyaha this noqon doonaa yar adkaysi u cudurada.
Doorashada saxda ah ee xaaladaha cimilada, waqtiga sanadka iyo ciidda ee kala duwan ee "Cardinal"
Sida hore u soo sheegnay, kala duwanaanta noocaas ah waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid furfuran, markaa, markaad beerto, waa in la tixgeliyaa:
Tani canab si aan caadi ahayn looga dalbado kuleylka. Sidaa darteed, waxaa fiican in ay ku beeri xaaladaha cimilada diiran oo leh jilicsan khafiif ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku siin kartaa natiijooyin aad u wanaagsan xataa xitaa markii lagu beeray gobollo aad u qabow iyo markii la siinayo baadiyaha canabka leh ee daryeelka lagama maarmaanka ah.
Waqtiga la doorbidayo ee beeritaanka Cardinal waa dabcan koorso, tan iyo kala duwanaanta noocaas ah waxay leedahay iska caabin aad u hooseeya ee heerkulka hooseeya. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto wakhtiga ka horaysa dalagyada dalagyada cagaaran, laakiin xaaladaha cimilada + 15ºS iyo heerkulka ciidda aan ka yareyn +10 ºC.
Noocyada canabka ah ee ugu fiican ee lagu sharraxay waxay awood u leeyihiin in ay midho dhalaan on carrada sida loam iyo sanduuq. Xulashada ugu fiican waa carrada madow, taas oo loo tixgelinayo ciidda ugu badan ee bacrin ah leh dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka u ah canab beerto.
Waxaa lagula talinayaa in lagu beero canab on dhismahaaga kaliya dhinaca koonfureed ee dhismayaasha ama taageerooyin kale oo ka ilaalin lahaa dabaylo qabow. Cabbiraadda canabku wuxuu ku haboon yahay koonfurta ama koonfurta galbeedka.
Canab dhirta "Cardinal" ee saamiyada
Ka hor inta aadan si toos ah u soconin geedi socodka sabirta, waa muhiim inaad diyaariso jarista.
Boorso wanaagsan waa inay lahaataa 2-3 indhood.
Qaybta hoose ee jarista waa in la jaraa dhowr millimitir oo ka hooseeya jilibka oo kaliya laba dhinac, si aad u hesho nooc noocaas ah.
Qeybta sare ee jarida ayaa la duugay si loo hayo qoyaan. Si tan loo sameeyo, goynta si dhakhso ah ayuu u galaa gaasta kulul ee kulul leh isla markiiba waxay galeysaa biyaha qaboojinta.
Qaybta jarida qaybta gooyuhu waa inay ku jirtaa biyaha wakhti yar kahor tallaalka, taas oo si wanaagsan u saameyn doonta aasaasida. Sidoo kale, waad ku daadin kartaa xalka dhiirrigelinta huurka (10 dhibcood oo ah daroogada halkii litir oo biyo ah).
Shayga waa in la siiyaa tababarka lagama maarmaanka ah. Inta badan, canab "Cardinal" waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo duur-joogta hore "Berlandieri X Riparia" ama "Shasla X Berlandieri". Kadib markaad ka saarto geedkii hore, qashin yar ayaa laga tegayaa, dusha sare ee loo baahan yahay in la nadiifiyo si siman u habboon.
Si toos ah oo dhexda ah, saamigu wuxuu u kala baxaa sidaas darteed waxaa jira fursad ah in lagu dhejiyo sabiibta godka. Kala saarista kaydka waa in si taxadar leh loo isticmaalo, iyada oo la isticmaalayo qalab yar yar iyo rook. Waxaan bilaabeynaa tallaalka:
Goynta ayaa si taxadar leh loogu meeleeyaa qaybta la jarjaray si ay garbaha ugu sii jirto farqiga u dhexeeya kala qaybinta.
Hantida waxaa si adag loo adkeeyay loona xidhxidhay si ay ugu cadaadiso sida ugu adag ee suurtogalka ah. Isku xirka, waxaa ugu fiican in la isticmaalo dharka suufka ah, taas oo labadaba ah mid xoogan oo awood u leh in la jebiyo waqti ka dib.
Goobta tallaalka waxaa lagu dhejin karaa dhoobo, taas oo hayn doonta qoyaanka lagama maarmaanka ah ee rootstock.
Tallaalka ka dib, waa mid aad u muhiim ah in lagu shubo saamiyo badan, oo uumi leh qoyaan lagama maarmaan ah. Si taas loo sameeyo, si wanaagsan u isticmaal ugu yaraan 3 baaldiyo oo biyo ah.
Mulching ee ciidda ku wareegsan oo kaliya geedkii canabkeed ee meesheedii ka soo baxay ayaa saameyn togan ku yeeshay dabaysha.
Daryeelidda noocyada kala duwan ee canabka "Cardinal" - waa hab lagu badbaadiyo beergooyska
Isku-simanaanta ka imanaysa miraha wadnaha ee wadnaha ayaa weli suurtagal ah in laga hortago oo lagu guulaysto. Si arrintan loo sameeyo, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhammaan cilladaha iyo cudurada suurtagalka ah si loo bilaabo inay la dagaallamaan waqtigooda.
Noocyo waraabin ah oo wanaagsan "Cardinal: waxa muhiim u ah in la ogaado canab?
Canabku wuxuu ka mid yahay dalagga jecel qoyaanka. Si kastaba ha noqotee, khasaarihiisa badanaa wuxuu noqonayaa sababta ay u jajabisay xitaa marka ay ku jiraan berrito bisil. Sidaa darteed, waxay u fiicantahay in lagu waraabiyo waraabinta geedka canabka ah laba jeer xilli: Xilliga ay gasho ubaxa iyo marka la dhammeeyo geeddi-socodkan. Si kastaba ha noqotee, xilliga abaarta, biyaha ayaa si aad ah u kordhaya. Xaalad la mid ah, haddii ay jirto tiro aad u badan oo roobab, waxaa lagula talinayaa in la abuuro nidaam dheeri ah oo dheeri ah goobta.
Dharka ugu sarreeya iyo mulching ee carrada canabka ah
Iyadoo la raacayo hababka noocan oo kale ah, canabku si aad ah ayay u buuxsantay qiyaasta muhiimka ah ee nafaqooyinka iyo heer sare oo ay awoodaan inay iska caabiyaan cudurada. Ciidda canabkuna waxay ku fiican tahay guga iyo dayrta, iyadoo loo adeegsanayo tan qiyaastii 3 sentimitir oo khudradda jilicsan. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa baadiyaha canabka iyo Bacriminta macdanta, kuwaas oo ka mid ah potash-fosfooraska ugu fiican.
Diyaarinta Vine Cardinal ee Qabow
Kala duwan Tani waxay ka cabsanaysaa dhaxan, sidaas darteed xitaa gobollada leh qaboobaha diiran, waxaa lagu talinayaa in ay daboolaan.
Hoyga, waxaad isticmaali kartaa hay iyo caws, kaas oo, la socda mulch, waxaa lagu faafiyaa goobo ku dhow-foosto ah, isku dayaya in ay daboolaan shtambka sabiibta sida ugu macquulsan. Haddii ay jirto halis ah barafoobidda geedka canabka ah - waxaa ugu wanaagsan in la dhigo dhulka iyo hoyga, sidoo kale jirridda.
Kaliya geedo lagu beeray waa in si taxadar leh loo daboolaa. Taas awgeed, weel weyn ayaa (doorbidayaa alwaax) inta badan waxaa loo isticmaalaa, kaas oo aan lahayn hoos. Waxaa la dhigaa kan canab ah oo gebi ahaanba daboolay carrada.
Geedka canabka ah ee canabka ah "Cardinal": maxaa muhiim u ah in la tixgeliyo?
Marka manjooyin waa mid aad u muhiim ah in la sameeyo geedka canabka ah laftiisa. Qeybta "Cardinal" kala duwan, foomka taageeraha ah ayaa ku haboon, ama waxaa loo qaabeyn karaa habka Huyo. Xaalad waliba, waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in fruiting wanaagsan culeyska keynta waa inaan ka badneyn 25-30 godadTan iyo baadiyaha kala duwan ee noocaan ah waa mid dhexdhexaad ah. Tirada caleemaha, oo aan ka badin doonin baadiyaha, waa 13-16.
Gooyaa waxaa la sameeyaa inta badan dhacdooyinka xilliga dayrta. Haddii aad go'aansato inaad sameyso nidaamkan guga - waa in la sameeyaa ka hor bilawga furitaanka indhaha canabka. Wixii canab "Cardinal", gooyaa waa inay gaabnaadaan, oo ka tagaysa ilaa 6 ilbiriqsi kasta.
Sidee loola tacaalaa cudurrada iyo cayayaanka canab "Cardinal"?
Maareynta ka hortagga baadiyaha ee canab "Cardinal" waa in la fuliyaaIyadoo aan sugin muuqaalka calaamadaha cudurka. Waxaa ugu wanaagsan in lagu buufiyo canab iyadoo leh fungicides inta lagu jiro muddada ka hor ubax ee baadiyaha iyo ka dib dhamaystirka geedi socodka. Haddii uu dhaco cudurro soo noqnoqda ayaa la sameeyaa. Maadaama daroogooyinka, waxaad ka qaadi kartaa kuwa aan wada dhicin ee aan waxyeelleyn dalagyada.